Dire Dire Dab Naareedow Rabi Diirka kaa Qaad – Rasaasa News
Jul 18, 2009 ciil u dhimo
Ruuxa aan gacantiisa ku ciil bixi karin, wuxuu ka shaqeeyaa in uu gacmaha wada dhashay ku ciil baxo, Maxamed Axmed-Daahir Gaas iyo C/wali Xuseen Gaas, maxay isu yihiin?. Maxaad dadweynow u malaynaysaan ruux isku diray labada magac ee kor ku yaal, oo uu garanayo waxa ay isu yihiin, oo waliba xan ma ahee waxaa uu qoraal ku soo bandhigay bogg ay akhrisanayaan kumanaan ruux.
Xishood daranaa xabaal lagugu ridyeey, ma ruuxaas ayaa wanaag bulsho ka shaqaynaya, ruuxa ay ka maaransiin weyday in laba ruux oo wada dhashay oo waliba rag ah doonaya in uu isku diro, kaasi isagaaba cadhaysan oo calooshiisa xumaantu cad cad ay ka dhigtoo wadadeedii cadaabta isgaa cagta saaray.
Waxaan soo xasuustay dood ku dhex martay makaayad ku taalay Luuqjeelow Caaqil yare iyo faarax cismaan, waxaa markaas murmaayey laba nin oo ah reer Warfaa, markaas ayuu caaqil yare yidhi “war anaga oo dhalasho ahaan isaga kiin fog isma dilo ismana khilaafno ee maxaa idinka oo wada dhashay aad maalin walba isu haysataan”, Yusuf Cismaan baa u jawaabay oo ku yidhi” Caaqil yarow maxaad calosha iskaga tumanaysaa war yaa idiin ogol in aad is dishaan idinku”.
Qolyaha Minneapolis looga yaqaan Cawro qaawan oo ah qolyo is uruursaday oo isu bahaystay hal beel ayaan iyagu marna qarsanin ujeedadooda qabyaaladeed, oo ay ku doonayaan in ay ku waxyeeleeyaan hal beel oo ay og yihiin in ayna wax yeeli karin. Ma aha ujeedadoodu Jwxo-shiil in ay wax u taraan ee waxaa haysata cuqdad rabaani ah oo ay u hayaan beel aan awal hore ka warhaynin dhibaatooyin badan oo loo gaystay maantase faham tahay, in qolyo badan oo reer Qorqxeey ah ay u dabo socdaan Jwxo-shiil in ay wax ku yeelaan beeshaas.
Waxaa boggan dhawr goor lagu karbaahsay dadkaas aan shegayno, oo runtii aan kuligood ceeb lahayn laakiin kuwa ka mid ahi ay u soo jiideen wax yeelo, hadii ayna beelahoodu la hadlin oo ayna ka joojinin dhibaatooyinka ay ku samaynayaan beelaha kale, waxaa xaqiiq ah in aanu bilaabi doono arimo aan dan u ahayn guud ahaan ummada Somalida Ogadeeniya iyo gaar ahaan ku ay ka soo jeedaan shaqsiyaadkaasi.
Jwxo, waxaa la ogg yahay in uu Jwxo-shiil dhigay kobta ay maanta taal, cid alaale cidi galad u galaysana waxaa la gudboon in ay wado kale qaado si dib la isugu soo duraanto ummadan kala diday. Cid alaale cidii bilowda in ay af lagaadayso shaqsiyaad beel waxay u badheedhay wax yeelo in ay soo gaadho.
Minneapolis ma ah Ogadeeniya waxaana looga baahan yahay in lagu ilmo korsado lagana xoogsado, laakiin waxaan loo baahnayn dhibaato halkan ka abuuranta ay wax yeelo gaadhsiiso dad aan wax galabsan wayna dhici taasi kolka qurbaha lagu heshiin waayo in dhulkii laysku qardoofo [cawsku meesha laga guro iyo meesha loo guro waxaa uu mar kasta ku badan yahay meesha laga guro] war hooy yeynaa guryaheen dab galinin.
Waxaan Jeclahay in aan hal idhaahdo ruuxaxa haleelo hadalka ku qoraya, caqli hadaad lee dahay ma aadan wiilal hal reer ah oo aad og tahay kuwa ay yihiin intaad magacdooda soo safto ma aadan caydeen. Waa kuu caqli xumo in aad labo wiil oo ilmo adeer ah in aad tidhaa hebel baa hebel dharbaaxay, oo anigu hebel baan la jiraa, waxaadna uga jeedaad in kolka ay labadoodu is dilaan aad masalahooda qaadato, waxaanan filayaa in haatan labadooduba ku og yihiin waxa aad rabto. Waxaa kale oo idinka warhaya beesha aad ku hoos jirtaan ee aad wali qandhuufada ku wadaan oo maanta iyadu dhinac isu raacday sidda beesha Dhagaxbuur.
Mida kale, hadaad Jwxo-shiil taageersanayd caydu taageero u noqon mayso oo Jwxo-shiil maanta meel qarin karta ama meel laga rabaa ma ay jirto geeska Afrika, xitaa reer Isaaq ma doonayaan in ay difaacaan, oo waxay samaysteen Cakaaranews.com/.
Awal horena halgan ma aydaan ku jirin ee caraatan ayaad boga u furteen, kolkii la idin fahmayna waad yaraha gaabsateen, wixiise habeenkan caawa ah ka dambeeya waxaan ka shaqayn in aan ood qaadno geed gaabka.
Waxaa kale oo aan fajaasaynaa geedka si aan u ogaano in xididadu ay geedka ka wada baxeen iyo in saar saarka qaar ka baxeen, waayo waxaaba soo baxday in laba nin oo ilmo adeer ah la damco in laga faa,iidaysto, maxaad u malayn bulshada inteeda kale.
FG, dadweynaha xil baa saaran in ay na hagaan ………….
Falaadhii cirka loo ganay cid walbaay filo
RASAAS WAALA JECLAADAY DADKIIBAA U RIYAAQAY RUUX KASTOO AKHRIYAANA RAALIBUU KA NOQDAA WAA RISAALAD GOBEEDOO RUNBAA LOOGUTAGAA WARKA AY RAKIBTAANA RASMI WEEYE XAQIIQ AH BEENA RAAD KUMA YEESHEE HA MOOGAANIN RASAAS